Maraoka: niseho masoandro ny fampiasana zaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Septambra 2009 3:24 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, Italiano, македонски, 简体中文, 繁體中文, Português, বাংলা, bahasa Indonesia, English
Zineb Chtit any amin'ny hopitaly
Misy zazavavy tsaboina noho ny ratra sy daroka nahazo azy ao amin'ny hopitaly. Tsy mahalala endri-piainana hafa ankoatra izay iainany ankehitriny i Zineb Chtit rehefa nalefa hiasa ho mpanampy an-trano tamin'ny faha-10 taonany, miasa amina mpanankarena sady midaroka no tsy manome hanina. Hoy ny nosoratan'i A Moroccan About the World Around Him (Maraokana iray miresaka momba ny tontolo manodidina azy) momba ny voina mahazo azy ao amin'ny lahatsorany iray:
Hita ho kaozatra i Zainab. Feno fariparitra sy dian-daroka ny tenany. Mena mivaivain'ny vy ny molony. Nodorana ny menaka ny tratrany sy ny faritra saro-pady. Tsy mahay mamaky teny sy manoratra izy. Tsy mba niainany veliely izany miara-milalao amina namana izany. Efa voafaritra ny ho aviny: mihaodihaody manodidina ny laona mandra-pahafatiny. Ary efa saiky lasana tokoa izy.
Indrisy fa tsy tranga manokana ny mahazo an'i Zineb. Mahatratra 177 000 ny isan'ny zaza latsaky ny 15 taona miasa any Maraoka, ka ny 66 000 dia mpanampy an-trano. Eny fa na dia efa nanasonia ny Dinan'ny Firenena Mikambana momba ny Zon'ny kilonga aza i Maraoka, mametra ho 12 taona raha kely indrindra vao mahazo alefa hiasa ny olona, fetra farany ambany ao an-toerana. Maro ny tatitra momba ny fampijaliana mpanampy an-trano, tahaka ity iray izay nosoratan'i Tingis tonian'i Anouar Majid ity. Nefa dia mbola mivarotra ny zanany vavy amin'izay mahasahy ambony indrindra ihany ny fianakaviana maro fa entin'ny fahantrana, ampiasaina ho mpanampy an-trano izay indraindray miasa tontolo andro sy tontolo alina. Mitantara ny mpanjò ny ankamaroan'ny mpanampy an-trano ny mpamaham-bolongana Sarah Alaoui:
Noho ny fahantrana mianjady dia tsy manan-tsafidy hamelomana ny ankohonany sy ny zanany ankoatra ny mandeha ho mpanampy an-trano any amin'ny mpanankarena ireo vehivavy tsy nandia fianarana any ambanivohitr'i Maraoka. Mbola asongadin'ny karazan'asa ataony – mpanampy an-trano natao ho hita fa tsy natao horenesina- ny holatry ny fahantrana efa naraikitra taminy teo am-piterahana. Miasa any ambadiky ny sehatra tahaka ireo mpanompo an-trano fitantaran'i J.K. Rowling any amin'ny boky tantara foroniny izy ireny.
Maro ny ankohonana any Maraoka no miezaka ny manome trano fialofana ho an'ny mpanampy an-tranony fa tsy toera-mpiasana ihany. Nanara-maso ny zanaky mpanampy an-tranony hatrany ny renibeko mba hahazoan'izy ireny fitaizana sy fampianarana tahaka ny an'ny zanany sy ny zafikeliny— Iray sekoly amin'ny anadahiko (cousin) i Naima, raha niasa tao amin'ny renibeko ny reniny. Saingy indrisy moa aleo tsorina fa tsy mitovy fikarakarana ny mpanampy an-tranony tahaka izany ny ankapoben'ny mpampiasa eto amin'ny firenena.
Ao amin'ny fitateram-baovaon'ny [FR] La Vie éco dia samy voampanga ho nanao heloka bevava avokoa na rangahy na ramatoa mpampiasa an'i Zineb, fa araka ny tolo-kevitry ny mpamaham-bolongana Reda Chraibi, dia tokony hisy haingana dia haingana ny fiovana. Namelabelatra [FR] soso-kevitra maro hisorohana ny fandefasana ny ankizivavy hiasa mbola kely ny mpamaham-bolongana. Santionan'ny tolo-keviny:
Manome fanampiana ara-tsosialy ny fianakaviana tena mahantra mba tsy hahatery azy ireny handefa ny zanany hiasa fa tsy hianatra. Tokony ho maimaim-poana na ny fampianarana na ny kojakojam-pianarana ho an'ireny sarangam-piaraha-monina ireny. Eo amin'izay indrindra dia tokony hatao manerana ny fanjakana ny fanapahan-kevitra mety hizarana kitapo efa misy kojakoja ao anatiny [FR]. Manome alalana ny fikambanana “Touche pas à mon enfant” (Aokanao ny zanako) na sampan-draharaham-panjakana hafa hanisa sy hanara-maso ireo zaza miasa tsy fidiny, manan-jò hiditra any an-trano hiresaka amin'ireny kilonga ireny hanamarinana raha voakarakara ny mahaolombelona azy. Handrisihana ny fitaizana sy fampianarana azy ireny hahay mamaky teny sy manoratra. Manokatra sy mampahafantatra ny fisian'ny toerana fandraisana ireo zaza te-handositra ny trano iasany, mba tsy hisy intsony Zineb Chtets feno ratra mirenireny eny an'arabe mitady fanampian'olon-tsy fantatra….
Nofehezin'i A Moroccan About the World Around Him (Maraokana iray miresaka momba ny tontolo manodidina azy) toy izao moa ny lahatsorany:
Tsaroako ny kabarin'Atoa Eliezer “Elie” Wiesel tao amin'ny Trano Fotsy tamin'ny 1999 nanao hoe “Ny gadra politika ao amin'ny efi-pamonjana azy, ny ankizy noana, ny tsy manan-kialofana – manoka-monina azy ireny ho tafala amin'ny tsiaron'olombelona ny tsy mamaly ny hetahetany, na tsy manome tara-panantenana ho azy ireny. Raha mandà ny maha-olombelona azy ireny isika dia mamadika ny maha-antsika antsika.